सडक आन्दोलनसँग मेरो कुनै साइनो छैन: ज्ञानेन्द्र शाह (सहि वा गलत ?)
दसैंलगत्तै देशका प्रमुख सहरहरूमा ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्ने नारा लागिरहेका छन । विभिन्न सहरमा चलेको यो आन्दोलनको एउटा ‘ट्रेलर’ सोमबार काठमाडौंमै पनि देखियो । र, यही मंसिर २० गते काठमामाडौंमा अर्काे त्यस्तै ‘विशाल’ र्याली हुँदैछ। त्यसको संयोजन अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले गर्दैछन ।
त्यही दिन पूर्वको झापामा पनि त्यस्तै खालको आन्दोलन हुने भएको छ । काँकडभिट्टादेखि झापा सदरमुकामसम्म ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्ने नारा लगाउँदै मोटरसाइकल ¥यालीको तयारी गरिएको छ । यस्तो छ ज्ञानेन्द्रको प्रतिक्रिया कात्तिक ६ गते दसैंको शुभकामना सन्देश ‘बक्स’ गर्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले भनेका थिए, ‘यसले मानसिक तनावको परिस्थिति पनि खडा गरेको छ ।
त्यसैले आज सबैले बढ्दो आशुरी र भष्माशुरी प्रवृत्तिबाट उन्मुक्ति चाहिरहेका छन । उनको स्पष्ट सन्देश थियो, ‘जनता यो शासन व्यवस्थासँग निराशमात्रै छैनन्, उनीहरूमा नयाँ अभिभावकको आवश्यकता महसुस भइसकेको छ । त्यसको एक सातापछि पहिलोपटक बुटवलमा भएको ‘राजा आऊ, देश
बचाऊ’ भन्ने आन्दोलनमा हजारौं युवा मोटर साइकलमा सहभागी भए । त्यसपछि त्यसको सिलसिला देशभरि चलिरहेको छ । दिनहुँ देशभरि फैलिरहेको र बाक्लिइरहेको यो आन्दोलनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको के साइनो छ ? पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका स्वकीय सचिव सागर तिमिल्सिना भन्छन, ‘सडकमा चलिरहेको यो आन्दोलनसँग ज्ञानेन्द्र सरकारको कुनै सम्बन्ध छैन ।
आयोमेलसँग कुराकानी गर्दै उनले सडकमा यो आन्दोलन किन र कसरी भइरहेको छ भन्नेबारे ‘नागार्जुन’ अनभिज्ञ रहेको बताए । राजपरिवारलाई यो आन्दोलनका बारेमा केही पनि थाहा छैन। कहाँबाट कसरी यो आन्दोलन उठिरहेको छ भन्नेबारे हामी नै अनभिज्ञ छौं,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘ज्ञानेन्द्र सरकारको भनाइ पनि यही नै हो ।
यो आन्दोलन हामीसँग सम्बन्धित छैन । उनले बरु त्यसको भित्री कुरा पत्ता लगाउन सञ्चारमाध्यमलाई नै आग्रह गरे । यो आन्दोलन किन र कहाँबाट सञ्चालित छ भन्ने कुरा त तपाईं पत्रकारहरूले पत्ता लगाउने हो,’ उनले भने, ‘त्यो त तपाईंहरूका लागि पनि बिग न्युज हुन्छ। लौ खोजेर हामीलाई नि भनिदिनुस् त !
विभिन्न ठाउँमा आन्दोलनको संयोजन गरिरहेकाहरूलाई पनि उनले यसबारे चासो राखेका थिए । मैले त हिजो सागर दाइलाई फोन गरेको थिएँ, उहाँले त बरु हामीलाई हप्काउनु पो भो,’ पश्चिमनेपालको एक सहरमा यस्तै आन्दोलनको तयारी गरिरहेका एकजना संयोजकले आयोमेलसँग भने, ‘तिमीहरू आफ्नै तरिकाले किन उफ्रिरहेका छौ ?
भनेर हामीलाई गाली गर्नुभयो । उनका अनुसार ‘जनस्तर’ उठेका कारण यो आन्दोलन भने रोकिने छैन ।
प्रकाशित मिति December 3, 2020
प्रधानमन्त्रीज्यू अब प्रदेश खारेज गरौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित गराैँ !’ (सहि वा गलत ?)